Madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Baydhabo, kana qeyb galaya caleema saarka Lafta Gareen – Banaadir weyne
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada Baydhabo,si ay uga qeybgalaan Caleema saarka Madaxweyaha K/Galbeed.
Garoonka diyaaradaha Baydhabo ayaa waxaa Wafdiga Madaxweynaha ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), Masuuliyiin isugu jirta heer Federaal iyo heer dowlad goboleed.
Munaasabadda Caleema saarka ayaa waxaa ka qeyb geli doonin Wakiilada Beesha caalamka oo horay u saluugay qaabkii u dhacday doorashadii Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Amaanka magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey, inta ay socoto munaasabadda caleema saarka,iyadoo la arkayay ciidamada amniga dowladda oo ku guda jira gudashada waajibaadkoodi oo la xiriira xaqiijinta amniga.
Doorashadii bishii hore ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa muran badan dhalisay, kaddib markii Ciidamada Itoobiya ay xireen Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa Musharaxiinta maalmo ka hor doorashada, waxaana xariggiisa ka dhashay banaan baxyo rabshado watay oo dhimasho iyo dhaawac sababay, waxaana maalmo kaddib dhacay doorashada oo ku soo baxay Musharaxii la filayay ee dowladda Federaalka taageereysneyd. – Jowhar News